Soo dejisan Cool Reader 3.3.61 – Vessoft
Soo dejisan Cool Reader
Reader Cool – software habboon in la akhriyo buugaagta elektarooniga ah. Qaababka ugu muhiimsan ee Reader Cool ka mid ah:, aqoonsiga xadka qormo ama horyaal iwm software ayaa taageero ah qaabab badan oo eBooks, yeeesha ka mid ah noocyada screen taageertaa unpacking ee buugaagta ka archives ZIP, rar, ARJ iyo LZH. Reader Cool bixisaa muujinta kor u akhris kuu ogolaanaya inaad si aad u dhegaysato buug, samaynta waxyaabo kale. Software ayaa sidoo kale waxay leedahay qalab waxtar leh ay ku akhristaan ​​buugaag iyo waxay leedahay fudud ah si ay u isticmaalaan interface.
Reading Easy buugaagta elektarooniga ah
La shaqaynta archives
Function of kor u akhris
Set A qalab waxtar u leh reading
Cool Reader Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... GameMaker 1.4.1657